EEC L7e Korantada Qaadista Baabuurka-Pony
Baabuurka korantada ee Yunlong oo leh ogolaanshaha EEC L7e waxaa si gaar ah loogu talagalay dhammaan codsiyada halkaas oo la isku halleyn karo, tayada wax soo saarka iyo naqshadeynta shaqeyntu ay yihiin mudnaanta.Gaadhigan korontada ku shaqeeya waa natiijada waayo-aragnimada sannadaha iyo tijaabooyinka goobtan.
Meelaynta:Loogu talagalay saadka ganacsiga, gaadiidka bulshada iyo gaadiidka xamuulka fudud iyo sidoo kale gaarsiinta mayl-ga ugu dambeeya.
Baakaynta & Soo dejinta:4 cutub oo loogu talagalay 1*40HQ.
EEC L2e Korantada Saddex Baaskiilada-J3
Yunlong EEC L2e saddex baaskiil oo koronto ah-J3 waa saddex baaskiil oo koronto ah oo qaadi kara 2-3 qof, si wax ku ool ah u daboolaya baahiyaha qoyska si ay u baxaan.Waxay leedahay muuqaal qurux badan, waxqabad wanaagsan iyo ammaan sare.Waxay ku safri kartaa 70-80 kilomitir halkiba, xawaaruhuna waa 35km/h.
Meelaynta:Waxay u egtahay baabuur yar-yar haddana wuxuu leeyahay qol heersare ah, badbaado leh, iyo qol hawo qaboojiye, goobta gaarka ah waxay u oggolaanaysaa baabuur wadista inuu ka fogaado dhibaatooyinka gaadiidka iyo baarkinka.
Baakaynta & Soo dejinta:4 cutub oo loogu talagalay 1 * 20GP;10 cutub oo loogu talagalay 1*40HQ.
EEC L6e Koronto Cabin Car-J4
EEC L6e Electric Cabin Car-J4 waa nooc cusub oo ay soo saartay Shirkadda Yunlong.Aad bay ugu habboon tahay waayeelka inay safraan.Waa ammaan iyo raaxaysi, waayo-aragnimo wanagsan ayuu u leeyahay wadista baabuurta, waa ka nadiif, waxaana loo isticmaali karaa waddada iyada oo aan lahayn liisanka darawalnimada, kaas oo ku habboon safarka.
Meelaynta:Wadista fogaanta gaaban iyo safarka maalinlaha ah, waxa ay ku siinaysaa ikhtiyaar gaadiid dabacsan kaas oo socon kara, nolol maalmeedkaaga si weyn u fududaynaysa.
Meelaynta: Bixi qaab cagaar iyo deegaan deegaan ah oo aad ku ag wareegtid.Eco raacitaanka safar maalinle ah, baabuur wadid masaafo gaaban, safarro ku gal dukaamada iyo adeegyada maxalliga ah, oo ku fiican agagaarka magaalada.
Meelaynta:Wadista masaafo gaaban iyo safar maalinle ah.Waxay ku siinaysaa gaadiid dabacsan oo ku wareegi kara, taasoo ka dhigaysa nolol maalmeedkaaga mid aad u fudud.
Meelaynta: Xalka ugu habboon ee saadka iyo qaybinta iyo rarida xamuulka saaxiibtinimo ee deegaanka.gaarsiinta mayl-da ugu dambeysa iyo xalalka saadka.
Meelaynta: Xalka ugu habboon ee gaarsiinta cuntada iyo saadka qaboojiyaha & gaadiidka ee magaalooyinka, is haysta oo si fudud ugu socda bartamaha magaalada.
Meelaynta:Gaadhi wadista masaafo gaaban iyo safar maalinle ah.Waxay ku siinaysaa gaadiid rogrogmi kara oo dhaqaaqi kara, nolol maalmeedkaaga si aad ah ayay u fududaynaysaa.